Magweta Okumbira Dare Kuti Ripindire Pamutongo Wakapihwa Nhengo dzeMDC
Kurume 05, 2008
Nyaya yekuti nhengo yeMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, VaMarvellous Khumalo, nevamwe vavo vasere, vopihwa here kana kuti kwete mukana wekubvisa mari yechibatiso, iri kunzwikwa mudare re High Court neChina.
VaKhumalo vari kukwikwidza musarudzo yekutsvaga mumiriri we St Mary’s mudare re House of Assembly.
VaKhumalo nevamwe vavo vasere vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga, uye vose vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso neChipiri. Izvi ndizvo zvakapa kuti magweta evasungwa ava, akumbire dare repamusoro kuti ripindire panyaya iyi.
VaAlec Muchadehama ndivo gweta riri kumirira vasungwa ava. VaMuchadehama vanoti mapurisa ari kupinzwa zvematongerwo enyika panyaya iri kupomerwa vasungwa ava. VaMuchadehama vanoti vanovimba kuti dare repamusro redzimhosva, richapa nhengo dzeMDC mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Nhengo dzeMDC inotungamirwa naVaTsvangirai, dziri kugara dzakashungurudzwa nemapurisa, pamwe nevatsigiri veZanu PF.